Weerar Culus Oo Lala Beegsaday Ciidamada Kenya. – Bogga Calamada.com
Weerar Culus Oo Lala Beegsaday Ciidamada Kenya.
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Kufaarta Kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobalka Jubbada Hoose.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa dagaal xoogan ku qaaday saldhiga iyo difaacyada ciidamada Saliibiyiinta Kenya ay ka sameysteen deegaanka Husingow ee gobalka Jubbada hoose,iyadoona dagaalkan la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dhawaaqa rasaasta dagaalka waxaa si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Jubbada hoose,waxeyna dadka deegaanka xaqiijiyeen iney jirta khasaara askarta Kenya kasoo gaartay dagaalkaasi.
Weerarkan ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaadeen waxa uu kasoo aadayaa xilli habeenadii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaallo ay ku qaadeen xarumo Murtadiinta ay ka kala sameysteen degmada Afmadow ee gobalka Jubbada hoose iyo magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari.